सामसुले एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूलाई जित्नको लागि आफ्नो रणनीति जारी राख्दछ। के यसले वास्तवमा काम गर्दछ? | Androidsis
सामसुले एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूलाई जित्नको लागि आफ्नो रणनीति जारी राख्दछ। के यसले वास्तवमा काम गर्दछ?
सामसु and र एप्पल बीचको प्रतिस्पर्धा मिडिया र दुई कम्पनीहरु बीच न्यायिक टकराव को समय मा अप्रत्याशित चरम पुगेको छ। तर, उही समयमा, कोरियालीले जहिले पनि उनलाई प्रतिद्वन्द्वी गर्ने प्रयोगकर्ताहरूलाई समात्न रुचि देखायो। वास्तवमा आजसम्म त्यहाँ अनगिनत नविकरण कार्यक्रमहरू भएका छन् र टर्मिनलहरू परिवर्तन गर्दा पहिले आईफोन राख्नेहरू समात्ने प्रयास भएका छन्। यस अवस्थामा हामीले अन्तिम प्रयासहरू थाहा पाएका छौं सामसु जो एप्पल फ्यान हरू लाई मनाउन को लागी एक आईफोन छ.
La व्यावसायिक प्रस्ताव कम्पनी को एक वेबसाइट मा स is्कलन गरिएको छ कि, यस समय मा, केवल अंग्रेजी मा उपलब्ध छ। यो क्षणको लागि इन्कार गरियो कि उनीहरूले स्पेनमा प्रस्ताव गर्नेछन्, र यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको लागि मात्र बाध्यकारी जस्तो देखिन्छ। जे भए पनि इन्कारको साथ कम्पनीको व्यवहार देख्दै युरोपमा सबैभन्दा नयाँ ग्यालक्सी नोट सुरू गर्नुहोस्मलाई लाग्दैन कि यो युरोपमा पनि वास्तविकता हुनेछ। अझै, आईफोन क्याप्चर गर्ने क्रममा यस पटक सामसु toलाई के भयो? के यी रणनीतिहरू साँच्चै काम गर्दछन्?
1 पदोन्नति को सर्तहरु
1.1 के यी व्यापार रणनीतिहरू काम गर्छन्?
पदोन्नति को सर्तहरु
को नयाँ पदोन्नति सामसु केवल ती व्यक्तिहरूको लागि मात्र हो जसको आईफोन छ, र तिनीहरूलाई साँचो प्रीमियम प्रयोगकर्ताहरूको रूपमा व्यवहार गर्दछ। एकातिर, हामी पाउँछौं कि कम्पनीले उनीहरूलाई सर्तबिना नै प्रस्ताव गर्दछ, र एक महिनाको लागि यो परीक्षण गर्न एक यूरो, ग्यालक्सी एस Galaxy वा ग्यालक्सी एस Plus प्लस टर्मिनलको प्रतीकात्मक शुल्कको एकल भुक्तान अन्तर्गत। यदि त्यो अवधिमा क्षतिहरू छन् भने, कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ। तर यदि एक पटक समाप्त भएन भने, प्रयोगकर्तासँग दुई विकल्पहरू हुन्छन्; कि त यो थप ado बिना फर्काउनुहोस्, वा एक धेरै उचित मूल्य मा यो किन्नुहोस्।
वास्तवमा, उचित मूल्य जुन सामसु Samsungले वाचा गर्दछ यो व्यावसायिक रणनीति अन्तर्गत यसको नयाँ टर्मिनलको लागि यसको चाल छ। वास्तवमा यसबाट फाइदा लिन तपाईंले आईफोन त्याग्नु पर्छ। प्रस्ताव को कोरियाली एकबाट अवस्थित एप्पल टर्मिनल बदल्नको लागि हो। तिनीहरूले तपाईंलाई कति तिर्ने छन्? खैर, सर्तहरूमा सामसु explains बताउँछ कि टेलिफोन कम्पनीले तपाईको हालको फोनका लागि बनाएको प्रस्तावमा निर्भर गर्दछ, यदि यो शर्त हो भने, उनीहरूले १०० थप डलर थप्नेछन्। कसरी? के एक iFan यस्तै विश्वस्त छ? अर्कोतर्फ, जो कोहीलाई किन्न प्रोत्साहित गरियो उसले पनि अतिरिक्त उपहार पाउनेछ। गुगल प्लेमा तपाईले चाहानु भएको सबैमा खर्च गर्न $ १०० को सन्तुलन भन्दा कम केहि पनि छैन। कस्तो लाग्छ?
के यी व्यापार रणनीतिहरू काम गर्छन्?
वास्तवमा, मलाई लाग्दैन कि कोही जाँदैछ स्यामसंगले हालैको जस्तो प्रस्ताव प्रस्ताव गरेकोमा आईफोन हुनु रोक्नुहोस्, वा हामीले अघिल्लो जस्तो देख्यौं। आईफोन र सामसु .सँग यसका साथ कुनै सरोकार छैन, र यदि प्रयोगकर्ता साँच्चिकै खुसी छ भने, यो परिवर्तन हुँदैन। तर ती मानिसहरु नि? इमानदारीपूर्वक, तिनीहरू यस्तै विश्वस्त हुन सक्छन्, तर के यो वास्तवमै उनीहरूलाई विश्वस्त बनाउँदैछ? मलाई लाग्दैन कि त्यो के हो भनेर बारे, यो केवल एक प्रोत्साहन हो उनीहरूको अन्तमा सैमसंग छनौट गर्न र एन्ड्रोइड संसारमा समान छैन। र यदि बजार नेता हो भने यो चेकबुकको स्ट्रोक बाहेक यो गर्न सक्षम छैन, मलाई लाग्छ कि कोरियाली कम्पनी भित्र उनीहरूले आफ्नै व्यवसायको मोडेललाई विचार गर्नुपर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Samsung » सामसुले एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताहरूलाई जित्नको लागि आफ्नो रणनीति जारी राख्दछ। के यसले वास्तवमा काम गर्दछ?
यस्तो देखिन्छ कि नोट sell बेच्ने निर्णयले धेरै व्यक्तिलाई मनपरायो
जहाँसम्म म चिन्तित छु, तिनीहरू मलाई भन्दैनन् किनकी म सैमसंगको बारेमा केहि पनि मनपर्दैन, मुख्यतया यसको डिजाइनहरू र यसको अनुकूलन तह।
जोसे गार्गन I भन्यो
होईन। म BQ मा सारियो।
जोसे गार्गन योलाई जवाफ दिनुहोस्
यो लामो समय लाग्दैन, केहि प्रस्ताव नगरीकन, मैले आफ्ना friends आईफोनहरू बेच्न वा परिवर्तन गर्नका लागि पहिले नै मेरा साथीहरूलाई विश्वस्त गरें, पछाडि पनीaवा s हप्तासम्म त्यस समयमा सामसु,, S4, र उनीहरूले परिवर्तनलाई मन पराए। । र तिनीहरू सुपेट fanboys hehe: पी
फर्नांडो Coletta भन्यो
के शीर्षक गलत छ? तपाईको मतलब एप्पल प्रयोगकर्ताहरू हुन्? ("..Android उपयोगकर्ताहरू।")
फर्नान्डो कोलेट्टालाई जवाफ दिनुहोस्